Ny Malta Philharmonic Orchestra dia mankalaza ny faha-50 taonany tamin'ny fitsidihana 3-tanàna amerikana
Home » Toerana fitsangatsanganana » Ny Malta Philharmonic Orchestra dia mankalaza ny faha-50 taonany tamin'ny fitsidihana 3-tanàna amerikana
Oktobra 9, 2018
Ny Malta Philharmonic Orchestra (MPO) dia hanomboka amin'ny fitsidihana amerikana voalohany, ny MPO Valletta 2018 Tour, mankalaza ny faha-50 taonany sy ny tranokalan'ny UNESCO an'ny Vakoka Iraisam-pirenena, Valletta, renivohitry ny kolontsaina eoropeana 2018. Ny MPO dia hotarihin'ny mpitantana malaza Sergey Smbatyan, Mpanakanto hajaina ao amin'ny Repoblikan'i Armenia izay miseho matetika miaraka amin'ny MPO.
Ity tetik'asa ity dia natolotry ny European Foundation for Support of Culture (EUFSC) miaraka amin'ny Malta Philharmonic Orchestra, notohanan'ny Valletta 2018 Foundation ary notohanan'ny Masoivohon'i Repoblikan'i Malta ho any Etazonia sy ny Malta Tourism Authority. Ny EUFSC dia manana tetik'asa sy hetsika lehibe dia lehibe izay voalamina any Malta sy any ivelany, miaraka amin'ny kalandrie midadasika indrindra nandritra izay telo taona lasa izay.
Ny fitsangatsanganana amerikana voalohany dia naharitra roa taona nahombiazana izay niarahan'ny MPO niara-niasa tamin'ny orkestra sy orinasam-pandihizana marobe ary nitana toerana malaza eran'izao tontolo izao, toy ny any Chine, Italia, Alemana, Austria ary Belzika.
Ny MPO Valletta 2018 Tour dia hanomboka any Philadelphia amin'ny 27 Novambra ao amin'ny Kimmel Center for the Performing Arts; miroso mankany Bethesda Avaratra amin'ny 29 Novambra ao amin'ny Music Center ao Strathmore - Washington DC, ary ny fijanonany farany dia any New York City amin'ny 1 Desambra ao amin'ny Carnegie Hall. Ireo kaonseritra dia hatrehan'i HE Keith Azzopardi, masoivohon'i Malta any Etazonia sy HE Carmelo Inguanez, solontena maharitry ny Malta ho an'ny Firenena Mikambana.
Ny kaonseritra tsirairay dia hanomboka amin'ny fampisehoana an'i Rebbieħa, tononkalo symphonic nosoratan'i Joseph Vella, mpamorona Gozitan.
Avy eo ny MPO dia hanohy ny asan'ny mpamoron-kira amerikanina-maltianina malaza, Alexey Shor, miaraka amin'ny pianistana Australiana Ingolf Wunder (mpandresy tamin'ny fifaninanana iraisam-pirenena maro, mpanakanto Deutsche Grammophon) ho soloista, alohan'ny hamaranana ny kaonseritra misy an'i Dmitri Shostakovich malaza. Symphony fahadimy.
Nanamarika i Michelle Buttigieg, solontenan'ny fizahan-tany any Malta Amerika Avaratra fa "Ny fotoana hanombohana ity dian'ny Malta Philharmonic Orchestra any Etazonia dia manasongadina ny fahaizan'ny kolontsaina sy ny tolotra isan-karazany an'i Malta amin'ny fotoana ahatsahantsika ny fitomboan'ny fizahantany any amin'ny Nosy Maltese avy any amin'ny tsenan'i Etazonia. ”